कोरोना कहरमा जेष्ठ नागरिकले कसरी मनाउने दसैं? :: सिर्जना खत्री :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोरोना कहरमा जेष्ठ नागरिकले कसरी मनाउने दसैं?
यस्ता छन् डा रमेश कँडेलका सुझाव
सिर्जना खत्री आइतबार, कात्तिक ९, २०७७, ११:४६:००
काठमाडौं- नेपालीको महान चाड बडादसैं नजिकै आइसकेको छ। दसैं मान्यजनको हातबाट टीका–प्रसाद ग्रहण गरेर मनाउने प्रचलन छ। टाढाटाढाबाट आफन्तहरु एकअर्काको घर जाने परम्परा छ। वर्ष दिनमा एक पटक आउने चाड भएकाले देश÷विदेशमा रहेका आफन्त, इष्टमित्र दसैंंको मौका छोपेर घर आउने गर्छन्।
निकै रमाइलो र तामझामका साथ मनाइने दसैंं यसपटक भने विगतभन्दा भिन्न हुने निश्चित छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दसैं निकै सावधानी र सचेतानपूर्वक मनाउनुपर्ने बाध्यता छ। कोरोना कहरका बीच आफू पनि जोगिँदै र संक्रमण फैलिन नदिएर दसैंं मनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
दसैंं एकै ठाउँमा भेला भएर रमाइलोका साथ मनाउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन् बढ्छ। त्यसमा पनि जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र दीर्घरोगीका निम्ति त यस पटकको दसैं मनाउन झनै चुनौतीपूर्ण छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोनाको उच्च जोखिममा ६० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक र बालबालिका हुन्छन्। यसको मुख्य कारण भनेकै जेष्ठ नागरिक र बालबालिकामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अर्थात् इम्युनिटी पावर कम हुनु हो। जसले गर्दा यी समूहका व्यक्तिलाई कोरोना लगायत अन्य संक्रमणजन्य रोगको जोखिम बढी हुने गर्छ। उमेर ढल्दै जाँदा उमेरजन्य दीर्घरोग पनि जेष्ठ नागरिकमा बढी देखिन्छ। त्यसले पनि उनीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ।
विश्वको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा बढी संक्रमितको मृत्युदर ६० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक छन्। र, नेपालमा मृत्यु भएका संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी जेष्ठ नागरिक नै छन्। बालबालिका र जेष्ठ नागरिक भएका परिवारले यसपालि दसैं मनाउँदा संक्रमण नफैलियोस् भनेर विशेष सतकर्ता अपनाउनुपर्ने जेष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डा रमेश कँडेलको सुझाव छ।
‘भीडभाड हुने ठाउँ जस्तैः पूजाआजा, भजन–कीर्र्तन, जात्रा, पर्व आदिमा जेष्ठ नागरिकलाई सहभागी नगराउनु नै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
दसैंंमा देश–विदशबाट आफन्तहरु आउने र एकै ठाउँमा जम्मा भएर मनाउने भएकाले कोरोना संक्रमणको सम्भावना बढी हुने डा कँडेलको भनाइ छ। उनी जेष्ठ नागरिकसँग भौतिक दूरी कायम राखेर चाडपर्व मनाउन आग्रह गर्छन्।
‘वर्ष दिनमा एक पटक आउने चाड धुमधामसँग मनाउने रहर सबैलाई हुन्छ। यो पटकको दसैं सकेसम्म आफ्नै परिवारले मात्र मनाऔं,’ उनी भन्छन्, ‘यदि घर बाहिरबाट कोही आफन्त आएमा दुई मिटरको दूरी राख्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने र बेलाबेलामा साबुनपानीले हाल धुनुका साथै स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ।’
कोरानाको उपचारका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि र खोप बनेको छैन। यदि खोप र औषधि बनिहाल्यो भने पनि नेपालमा सर्वसुलभ रुपमा पाउन निकै समय लाग्छ। त्यसैले सरकाले तोकेका जनस्वास्थ्यका मापदन्ड पालन गरी आफू र आफ्नो परिवार जोगाउन विज्ञको सुझाव छ।
जेष्ठ नागरिक भएका घरमा दसैं यसरी मनाऔं : डा कँडेल
– सकेसम्म घरका सदस्यबीच मात्रै दसैं मनाउँदा राम्रो।
– घरबाहिरका सदस्य आउनैपर्ने भएमा भीडभाड नगरी जेष्ठ नागरिकभन्दा दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम राखेर दसैं मनाउने।
– मास्क लगाउने, बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुने। सकेसम्म दक्षिणा लेनदेन नगर्ने। यदि गर्नै परे दक्षिण समातिसकेपछि साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने।
– चाडपर्वमा चिल्लो, अमिलो, पिरो खानेकुरा बढी मात्रामा पाक्ने हुँदा जेष्ठ नागरिकले त्यस्ता खानेकुरा सकभर नखाने। खानैपर्ने भए थोरै मात्रामा खाने। किनकि यस्ता खानेकुराले अन्य दीर्घरोग निम्तिने सम्भावना बढी हुन्छ।
– जेष्ठ नागरिक तथा परिवारका अन्य सदस्यले पनि धूमपान तथा जाँडरक्सीबाट टाढै बस्ने।
कोरोनाबाट जोगिन ध्यान दिनुपर्ने कुरा
भीडभाड हुने ठाउँ जस्तैः पूजाआजा, भजन–कीर्तन, जात्रा, पर्व आदिमा जेष्ठ नागरिकलाई सहभागी नगराउन डा कँडेलको सुझाव छ।
ज्वरो रुघाखोकी लागेका बालबालिका एवं वयष्क तथा अन्य जेष्ठ नागरिक पनि जेष्ठ नागरिकको नजिक नजाने तथा जानै परेमा कमसेकम २ मिटर भौतिक दूरी कायम राख्नुगर्ने डा कँडेल बताउँछन्। उनका अनुसार जेष्ठ नागरिकको नजिक जाँदा साबुनपानीले हात धोएर स्यानिटाइजरले हात सफा गरेर मात्र जानुपर्छ।
जेष्ठ नागरिकमा कोभिड–१९ को पहिचान कसरी गर्ने ?
डा कँडेलका अनुसार जेष्ठ नागरिकमा बढ्दो उमेर, शारीरिक परिवर्तन एवं घट्दो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारण वयष्क मानिसमा भन्दा जेष्ठ नागरिकमा कोरोनाका फरक लक्षणहरु देखिने गरेका छन्।
यदि ज्वरोका साथसाथै श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएमा, शरीरको तापक्रम १०० डिग्री फरेनाइटभन्दा कम देखिएमा ज्वरो आउनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने डा कँडेल बताउँछन्।
श्वास फेर्न गाह्रो भएमा, छाती दुखेमा, खाना रुचि नभएमा, निरन्तर अत्यधिक थकान महसुस भएमा, निद्राबाट जगाउन गाह्रो भएमा, होस हराउने वा ठाउँ–समयको चेतनामा गडबड भएमा, झाडापखाला वा वान्ता भएमा कोरोना हुनसक्ने भएकाले तुरुन्तै अस्पताल लैजानुपर्ने डा कँडेलको सुझाव छ।
जेष्ठ नागरिकलाई कोरोना लाग्नबाट बचाउन के गर्ने ?
जेष्ठ नागरिकमा धेरै कुपोषण देखिने हुँदा उनीहरुलाई घरमा पाइने सागपात, गेडागुडी र फलफूल, माछामासु प्रशस्त मात्रामा खुवाउनुपर्ने कँडेल बताउँछन्।
यस्ता खानेकुराले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्धत गर्छ। भिटामिन डीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भएकाले जेष्ठ नागरिकलाई केही सयमका लागि पारिलो घाममा पातलो कपडा लगाई राख्नुपर्छ।
एक्लै बस्ने जेष्ठ नागरिकलाई परिवारसँगै राख्नुपर्छ। सँगै बस्न सम्भव नभए स्याहारकर्ताको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
मानसिक समस्या कम गर्न योग र ध्यान
जेष्ठ नागरिक घरभित्रै लामो समय एक्लै बस्दा मानसिक समस्या हुने सम्भावना हुन्छ। यसका लागि परिवारका अन्य सदस्यले बेलाबेलामा कुराकानी गरिरहनुपर्छ।
आफन्तलाई पनि बेलाबेलामा फोन वा अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी जेष्ठ नागरिकसँग नियमित सम्र्पकमा राखिरहनुपर्छ। उनीहरुको मानसिक तनाव कम गर्न शारीरिक कसरत गर्न लगाउने वा घर वरिपरि हल्का घुम्न लगाउनुपर्छ।
मानसिक तनाव हुने मान्छेको रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। त्यसकारण जेष्ठ नागरिकलाई तनावमुक्त राख्न डा कँडेलले सुझाएका छन्।